ဖူးနုသဈ: သိပ်ပံနညျးကြ မွနျမာစာ
Posted by ZT at 2:02 AM
ပို့စ်ထဲက English ပန်ဂရမ် ဖြစ်တဲ့ “A quick brown fox jump over the lazy dog” မှာ jump နောက်က s ကို ဘာလို့ ဖြုတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ လျှောက်လဲချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ထုချေပါ။
ဒီပုံအတိုင်းဆို s ပျောက်နေတယ် ဆြာကီး...။
Thanks Ko Boyz. I will correct it.
မြန်မာစာကို ခုလို သိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ
ကျွန်မက ကကြီးခခွေးတွေနဲ့ အတော်အတန်ရင်းနှီးခဲ့ဖူးတော့ ခုလို နည်းကို စိတ်ဝင်စားမိတယ် မှတ်သားဖို့လည်း လွယ်တယ်လေ
ကကြီးခခွေးနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာက သူငယ်တန်းဆရာမ လုပ်ခဲ့ဖူးတာကို ပြောတာပါ။း)